Marine Le Pen oo uu baaritaan ku socdo - BBC News Somali
Marine Le Pen oo uu baaritaan ku socdo
Image caption Marine Le Pen ayaa beenisay in ay wax khalad ah gashat
Ms Le Pen ayaa xilligii uu socday ololaha doorashada waxa ay diiday in ay ka jawaabto su'aalo ku aaddan eedeymaha ah in ay ku tagri fashay maalka umadda.
Dembi baarayaasha Faransiiska ayaa hadda baaritaan rasmi ah ku billaabay Ms Le Pen, oo loo haysto inay ku tagri fashay lacag dadweynuhu leeyahay oo lagu aaminay.
Dacwadda ayaa ku salaysan eedeyn ay soo jeediyeen baarayaasha baarlamaanka Yurub, kuwaasoo sheegay in Ms Le Pen iyo xisbigeeda National Front la siiyay malaayiin euro si ay ugu qortaan kaaliyayaal ka caawiya howlaha baarlamaankaasi, balse lacagtaasi ay u adeegsatay in ay ku bixiso mushaaraadka madaxa shaqaalaheeda iyo ilaaladeeda gaarka ah.
Sidoo kale 17 ka mid ah xubnaha uu xisbigaasi ku leeyahay baarlamaanka Yurub ayaa iyagana waxaa ku socda baaritaan ah in ay lunsadeen 5 milyan oo euro.
Ms Le Pen ayaa horay u beenisay in ay wax khalad ah gashay, waxaana ay sheegtay in baaritaanka uu yahay mid ay siyaasadaysan. Waxa ay intaa ku dartay in ay iska difaaci doonto dacwad kasta oo lagu soo oogo.